Turera ye _50 Shades Yakasunungurwa_. Iyo cinematographic trilogy inovhara. | Zvazvino Zvinyorwa
Turera ye _50 Shades Yakasunungurwa_. Iyo cinematographic trilogy inovhara.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Noticias, Novela, Romance novel
Enderera mberi, handina kuverenga chero ripi zvaro remabhuku nekuti chokwadi ndaisagona kupfuura peji 50. Asi ini ndichagara ndichimuziva kukosha kweiyo kubudirira pasirese yakawana zvese muverengi nevatariri, kunyangwe iyo yekupedzisira inogona kunge yakafanana. Kubudirira kwe EL James zvirokwazvo ngowani inofanira kubviswa zvisinei nemafungiro mazhinji anopesana pamusoro pemabhuku nemamuvhi.
Iye zvino yaendeswa tirera ye 50 shades yasunungurwa iyo inovhara iyo cinematographic trilogy uye iyo ichaburitswa mwedzi unotevera wa February. Ini ndinogadzira kudzokorora kune izvo zviripo uye zvicharamba zvichitaura pamusoro pe kugadzirisa firimu yemazita aya akatengesa kudarika 150 mamirioni emakopi kutenderera pasirese. Ramba uine nyeredzi mariri Dakota johnson y jamie dornan.
Uye, kwechinguvana, izvo zviri kuitika izvozvi izvo zvakajairika zvekufungidzira Nguo yemuchato yaAnastasia Steele pamuchato wake naVaGrey. Kana zvirinani ndizvo chinonyanya kumira pachena mune chikamu chakanaka chemisoro pamambure.
Zvinoita sekudaro aesthetics uye yakanyanya kuwanda ruzivo yeiyi trilogy inoenderera mberi kumira pamusoro peshure kwavo kana nyaya. Uye izvo zvaiita senge rudzi rwe shanduko yebonde inosanganiswawo mumufananidzo iwoyo unoshamisa iyo yakasarudzwa kuvhura iko kuvharwa kweanogadziriswa.
Izvo zvaive zvakare kuti kupera ngatitii zvakajairika iyo iyo yakanetsa avo vaive vajekesa iyo poindi poindi yezvinhu zvepabonde «Hazvizivikanwe» mumabhuku anonyanya kudanana uye inopedzwa neruzhinji rwevanhu. Asi vanonyanya kuda saga, vatambi, kumisikidza uye rangano pasina mubvunzo vacharamba vachinakidzwa nekuzvipira.
1 Makumi mashanu emvuri yegrey
2 50 mimvuri kusviba
3 50 shades yasunungurwa
4 Tichazviona here?
Yakabudiswa mugore 2011, zvese zvaive a zvinyorwa zvinoitika izvo zvakaramba zvichichengetwa. Set in Seattle, chikamu chekutanga chetrilogy inotaurira hukama hwe kungopedza kudzidza weYunivhesiti, Anastasia Steele, pamwe nevechidiki bhizinesi mogul Christian Gray.
Su kubudirira kana ruzivo: svitsa mumatanho eruzhinji rwerudo mifananidzo yakajeka nezvinhu zve muusungwala kutonga uye kuzviisa pasi uye sadomasochism. Asi idzi pfungwa dzinosanganisira akawanda ma nuances nemadhigirii sezvaunoda.
50 mimvuri kusviba
Anastasia anosarudza kuputsa Grey pamberi pekumanikidzwa kwemafomu ayo hukama hwehukama hwahwo uye zvakare neiyo kwasviba zvakavanzika yemumwe muzvinabhizimisi airwadziswa. Asi chishuwo chako kwaari hazviregi uye haakwanise kuramba kudzokera kwaari. Nekudaro, Ana anozoziva zvakatowanda nezve izvo zvakapfuura zvakapfuura. Pamusoro pazvo, anofanira kusangana nehasha uye godo remadzimai akauya pamberi pake.
50 shades yasunungurwa
Kana Anastasia achinetseka kuwana kuzvipira kukuru iye, Mukristu achawana chero bedzi ndisiri kurasikirwa nayo. Saka ivo pakupedzisira vanazvo zvese: rudo, kushuva uye mikana isingaperi yeramangwana rako. Asi Ana anoziva kuti rudo urwu harusi basa riri nyore. Iwe unofanirwa kudzidza kugovana hupenyu hwoumbozha hwaGrey nehunhu hwako. Uye Mukristu anofanira kudaro tora kukwezva kwako kumanikidza kutonga sezvo iye achiramba achirwa nemadhimoni ake apfuura. Asi Ana achabudirira uye isu tichava ne classic mufaro kupera.
ari vanofarira uye vanozvipira vanoda saga ivo vachatove vachironga iyo meetups yaFebruary. Uye semumwe muverengi akanaka weanofarira mabhuku akateedzana, iwe uchave kumirira machisi kana kwete nezvamakaverenga. Iye achanyunyuta nezve izvo zvapfuura kana izvo zviri kushaika uye rant nezve iyo vazhinji vanopokana nehasha, kuti zviripo uye zvichavepo.
Chaizvoizvo, izvo zvandakave nekugona kuona yakawanda yesaga iyi ndeyekuti hapana nzvimbo dzakagoverwa pakati pevaverengi vakazvipira kuna Steele naGrey nevaya vanovasema. Uye zvakare mune izvo zvazviri hunhu hweichi chisikwa kubva kumunyori weBritish EL James. Haina kusiya chero munhu asina hanya. Isu tese takatarisa tichitsvaga bonde, zvikwapuro uye kinky yakakomberedzwa nemari neumbozha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Romance novel » Turera ye _50 Shades Yakasunungurwa_. Iyo cinematographic trilogy inovhara.
Mashoko akakurumbira aEmilia Pardo Bazán